Time to go android Development - MYSTERY ZILLION
Time to go android Development
Android ဆိုတာကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ Android စထွက်ကာစက iPhone ကို ယှဉ်နိုင်လောက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ မရှိပေမယ့် အခုအချိန် Android 2.1 မှာ တော်တော်လေးကို ပြီးပြည့်စုံလာသလို SDK ကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Mobile Development ဆိုတာက တခြား Sotware Development ထက်စာရင် ပိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ စျေးကွက်လို့ ဆိုရမယ်။ လူတိုင်း Computer မသုံးတတ် ၊ မသုံးနိုင်ပေမယ့် လူတိုင်းနီးပါး ဖုန်းဝယ်သုံးကြတယ်။ နောက်ပြီး Mobile Software အတွက် ပိုက်ဆံကို မနှမြောကျတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Software အခွေတွေဟာ ခိုးကူးခွေတွေကြောင့် တစ်ခွေ ၁၀၀၀ နဲ့ ပေါပေါ ရပေမယ့် လူတိုင်း Mobile Application တွေကို မသွင်းတတ်တာက တစ်ကြောင်း နောက်ပြီး Mobile Application crack တွေကို အင်တာနက်မှာ download ချပြီး သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကို မသိတာက တစ်ကြောင်း တို့ကြောင့် mobile application တွေကို ဆိုင်မှာ သွင်းခိုင်းကြတာများတယ်။ နောက်ပြီး software တွေကိုလည်း ဝယ်သုံးလိုက်ကြတာများတယ်။ လက်ရှိ လူသုံးများတဲ့ mobile ကတော့ Nokia ပဲပေါ့ :rolleyes:။
အခုအချိန်မှာ Touch တွေ ခေတ်စားလာတဲ့အမျှ Android ဟာလည်း အောင်မြင်လာတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မကြာခင်ကာလမှာ Android ဟာ အောင်မြင်လာနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Android ဟာ OS က free ဖြစ်လို့ပါ။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်ဖုန်းတွေ စျေးကွက်တည်း စဝင်လာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်ဖုန်းတွေ Nokia လိုမျိုး Symbian OS ကိုထည့်သွင်းထား ပါပေမယ့် နောင်တချိန်မှာ Android ကိုပြောင်းလဲလာဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။ ဘာလို့ Android ကို အခုအချိန်မှာ စလေ့လာဖို့လိုသလဲဆိုတော့ စျေးကွက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ရင် အသင့်ရှိနေအောင်ပါ :cool:။
Android က iPhone App ထက်စာရင် apk ကို တိုက်ရိုက်သွင်းလို့ရတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သင့်တော်တဲ့ အချက်ပဲ။ ဆိုင်တွေမှာ apk file ပေးထားပြီး သွင်းခိုင်းပြီး ရောင်းချတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် apk file ကိုပဲ internet ကနေ free ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်လျော်ပါတယ်။ Apk ဆိုတာကတော့ နားလည်အောင်ပြောရရင် Android app installer file ပေါ့။ Android SDK နဲ့ရေးပြီး complie လုပ်လိုက်ရင် APK file ရပါတယ်။ အဲဒီ APK file ရရင် Android တွေ မှာ သွင်းလို့ရပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်ပုံစံအရ hardware လိုက်ရောင်းချလာတာတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ Android OS တင်ထားပြီး APK အရံသင့် သွင်းထားတဲ့ hardware တွေ ရောင်းချလာနိုင်တယ်။ ဥပမာ။။ Dictionary လိုမျိုးပေါ့။ Android OS ရဲ့ အားသာချက်က Screen အရွယ်အစားမရွေးတာပဲ။ နောက်ပြီး hardware ကောင်းရင်ကောင်းသလောက် မြန်ဆန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Nexus One ဟာ Android ဖုန်းတွေထဲမှာ သဘောကျစရာအကောင်းဆုံးနဲ့ လက်ရှိ အကောင်းဆုံး Android လို့တောင် ဆိုလို့ရပါတယ်။
သမာရိုးကျ APK ရောင်းတာထက် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ hardware နဲ့တွဲပြီး ရောင်းချတာ ပိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိပါတယ်။ Dictionary ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား ကိုယ်ပိုင် Software ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သေးသေးလေးမဟုတ်ပဲ apk file တွေ ခိုးကူးမှာ ကြောက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အဲလိုမျိုး hardware လိုက်ရောင်းချလာဖို့ ရှိလာနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိကလိုအပ်တာက Android Developer တွေပါ။ လက်ရှိ mobile developer တွေအနေနဲ့လည်း Android ကိုစလေ့လာသင့်နေပါပြီ။ java အခြေခံရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လေ့လာဖို့ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ Android SDK ကို http://developer.android.com/sdk/index.html မှာ download ချနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Eclipse နဲ့ တွဲရေးဖို့အတွက် android ADT plugin ကို http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html အဲဒီမှာ သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Android SDK ကိုသွင်းရတာ အစက ခက်ခဲပေမယ့် gooling လုပ်ပြီးတော့ ဖြစ်စေ MZ မှာ ဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်ကတော့ iPhone Objective C ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်။ Android ကိုတော့ သွားဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Apple Fan ဖြစ်နေလို့ပဲ :redface: ။
မနေ့က MZ ပွဲမှာ ကိုမောင်ပြုံးရဲ့ android အကြောင်းကိုနားထောင်ပီးအတွေးတခုရလာခဲ့တယ်။သူရေးထားတဲ့ app က sudoku။ကျနော်လဲ စဉ်းစားမိသွားတယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါးပါး app တွေကိုရေးချင်လာတယ်။ကို်ယ်ဟာကို စဉ်းစားထားတဲ့ entertaiment ဆန်တဲ့ app လေးတွေရေးချင်လားတယ်။မရှက်တမ်း ၀န်ခံရရင် iPhone user တယောက်ကနေ Developer တယောက်ဖြစ်ချင်လာတယ်။ကိုမောင်ပြုံး ကတော့ android ရဲ့ အားသာချက်တွေကိုပြောသွားတယ်။ကျနော်ကတော့ ပန်းသီးကိုဘဲ ချစ်တယ်။ဒါကြောင့် iphone Developer ဘဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါပေမယ့် programming language တွေကိုတခုမှတတ်ဘူး:redface:။ဒီတော့ ကျနော်သိချင်တာကဘယ်ကနေ စလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသိချင်တာပါ။
iPhone development အတွက် အရင်ဆုံး objective c ကို လေ့လာရပါမယ်။ အရင်ဆုံး C++ ကိုလေ့လာပါ။ ပြီးရင် objective c ကို အနည်းငယ် လေ့လာပါ။ ပြီးရင် iPhone Development စလုပ်လို့ရပါပြီ။ C++ လေ့လာပြီးလို့ programming အကြောင်း အနည်းငယ်သိပြီဆိုရင် standford က iPhone Programming course ကို iTune ကနေ download ဆွဲလို့ရတယ်။ iTuneU နဲ့ လုပ်ရတာကြလာလို့ တိုက်ရိုက် download လိုချင်ရင် ကျွန်တော် upload တင်ပေးလိုက်ပါမယ်။
ကျနော်လက်ရှိ Motorola Android ကိုသုံးနေပါတယ်။Firm Version ကတော့ Droid 2.1 ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် ဒီထက် ပိုပြီး Droid အကြောင်းကို သိချင်ပါသေးတယ်။
ဥပမာ system အကြောင်းနဲ့ တခြား အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။လေ့လဲလေ့လာနေပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါဘဲကိုစေတန်။ခုလိုဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်လာအောင်ကူညီ ပေးခဲ့တဲ့ ကိုမောင်ပြုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။C++ ကိုစလေ့လာပါတော့ မယ်။တလက်စတည်း ရန်ကုန်မှာ C++ ကိုဘယ်မှာတက်ရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ MZ ၀ိုင်းတော်သားများ၀ိုင်းအကြံပေးပါဦး ။
အမြန်ဆုံး iPhone development နည်းကတော့ phonegap ပဲ.. phonegap က iPhone အတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်.. ဒါပေမယ် ့အချို့ API တွေကို သုံးလို့မရဘူးပေါ့.. အဲဒါတော့ ရှိတယ်.. Phone Gap ကို jQtouch နဲ့တွဲသုံးလိုက်ရင် Application ဖန်တီးရတာ အရမ်းမြန်ပါတယ်။ HTML+CSS+jQuery တတ်ရင် iPhone App ရေးလို့ရပါပြီ။ Database ပိုင်းတွေပါလာရင်တော့ phonegap ကို မသုံးသင့်တော့ဘူး..
ကိုစေတန်ရေ phonegap ကHtml,CSS,JQuery တတ်ရင် app ရေးလို့ ရဘီဆိုတော့ objective c လမ်းနဲ့ phonegap လမ်းဘယ်ဟာကိုအရင်စလေ့လာရမလဲမခင်ဗျ။ပီးတော့ တချို့့ API တွေသုံးလို့မရဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုပြောတာလဲ။မသိလို့ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ C ကို အရင် လေ့လာဖို့ပေးပါတယ်.. Native is the Best =D
iPhone မှာ သုံးလို့ရတဲ့ API တွေအပြင် အခြား library တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ။။ Map API , geolocation , oAuth, Sqlite စတာတွေပေါ့... phonegap က အများကြီးမရဘူး။ website ရေးသလိုပဲ ရေးလို့ရမယ်။ ဥပမာဗျာ။ ဖုန်းခေါ်တဲ့ program ပေါ့။ အဲလိုမျိုးတွေ phonegap နဲ့ ရေးလို့မရဘူးဗျ။ နောက်ပြီး twitter client လိုမျိုးရေးချင်ရင်တော့ Native ကပိုအဆင်ပြေတယ်။
Objective C က C++ နဲ့ C တို့နဲ့ ဆင်ရုံပဲ ရှိပေမယ့် ကွာပါတယ်။ နောက်ပြီး iPhone က Objective C အပြင် MVC ကို ပါသုံးထားတယ်။ အကောင်းဆုံးက programming ကိုလေ့လာတာပဲ။
Native is the Best but time is important.
Mashable လိုမျိုး app ရေးဖို့ Objective C နဲ့ ရေးတာထက် phonegap နဲ့ဆို အများကြီးပိုမြန်တယ်။ အချို့ function တွေ မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် Phonegap နဲ့ အမြန်ချလိုက်လို့ရတယ်။ native နဲ့ရေးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ အလျင်လိုတဲ့ project တွေဆိုရင်တော့ prototype လောက် client ကိုပြဖို့ phonegap နဲ့ အမြန်ချလိုက်တာပိုကောင်းတယ်။ :biggrin:
ဒီနေ့ ကျနော်C++ တက်မလို့ သင်တန်းတခုကိုဖုန်းဆက်မေးတယ်ဗျ။တကယ်ဗျာ ကျနော်စိတ်တိုလိုက်တာ C++ ကခေတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ မောင်လေးတက်ချင်ရင် .Net တို့ java တို့ဘက်ကိုလိုက်ပါလားတဲ့။ကျနော်စိတ်လေ သွားတယ်။C++ သင်တန်းကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရှာပီးတက်မယ်ဗျာ။ပီးတော့ phonegap ကိုလေ့လာမယ်ဗျာ။ကျနော်စိတ်ကူးနဲ့ ရူးထားတဲ့ app တွေက entertainment ဆန်တဲ့ appတွေဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါဘဲ။ဥပမာ Mr.postive ဆိုတဲ့ app လိုမျိုးပေါ့။
အို.. တို့ Android လည်း ( ပြောပုံကိုက ရိုက်ပေါက် :P ) လည်း MVC ပါပဲတော်..
Layout ဆိုတဲ့ View ရှိတယ် .. Model လည်းပါတယ် Controller လည်းပါတယ် :P
ဟင်. ဒါကတော့ လိုရာ ဆွဲပြောတာ :P
ဒီနေ့ ကျနော်C++ တက်မလို့ သင်တန်းတခုကိုဖုန်းဆက်မေးတယ်ဗျ။တကယ်ဗျာ ကျနော်စိတ်တိုလိုက်တာ C++ ကခေတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ မောင်လေးတက်ချင်ရင် .Net တို့ java တို့ဘက်ကိုလိုက်ပါလားတဲ့။ကျနော်စိတ်လေ သွားတယ်။C++ သင်တန်းကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရှာပီးတက်မယ်ဗျာ
Java သာ လုပ်ပါဗျာ ( သူများကို မြှောက်ပေးရမယ် ) အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ရယ်.. Desktop / Web / Mobile / Cross-Platform ..
and Java will never die
Objective C ကတော့ဖြင့် Mac ရှိလို့သာ အားနားပါနားနဲ့ ဖတ်ဖူးတာ.. နောက်နောင် မထိတော့ပါဘူး